Belstaff Zvepamutemo Zviito Kuvhara Mazana eInternet Yekunyepedzera Zvitoro ECommerce nhau
Eva maria Rodriguez | | Zvechokwadi uye nhau, eCommerce
Pamwe haisi nhau huru dzevatengi vanotenga pamhepo zvigadzirwa zvekunyepedzera tichiziva kuti varipo. Nekudaro, vanhu vanokoshesa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nyanzvi dzakazvipira mukushambadzira ivo vanofara kuziva iro danho repamutemo rinotorwa neiyo yepamusoro fashoni brand Belstaff vawana zvibereko zvavo, vachikwanisa kuvhara mazana e pazvitoro zvepamhepo zvinotengesa zvekunyepedzera.
Asi haina kumira pano. Mutongo wematare eUnited States unosimbisa kuti fashoni yemhando yepamusoro inofanira kugamuchira mamirioni makumi matatu nemaviri emadhora mukukuvara.
1 MarkMonitor anokunda kurwa nevanonyengedza online
2 Kutengeswa kwepamhepo kwemafashoni emhando yepamusoro kucharamba kuchikura
3 Zviuru zveCommerce zvakatengesa zvekunyepedzera zvakabviswa
MarkMonitor anokunda kurwa nevanonyengedza online
Nhau dzakaziviswa na MakaMonitor, mumwe wevanotungamira vanopa ekuchengetedza maratidziro emakambani uye chikamu cheSainzi neIntellectual Property kupatsanurwa kweThomson Reuters, nhasi vazivisa kuti yemhando yepamusoro fashoni brand Belstaff, mumwe wevatengi vayo, akunda kurwa kwayakavhurwa nevanyengeri vanotengesa online.
Kutevera kumatare edzimhosva kumatare eUS, vatongi vatongera vanonyengedza kubhadhara 37 miriyoni euros ($ 42 miriyoni) mukukuvara. Mune ino anti-yekunyepedzera bhenji kesi, isina kumboitika nhamba yeanokanganisa mawebhusaiti, 676 mune ese, akapihwa sehuchapupu kuBelstaff.
Uku kubudirira mumutemo kwakauya mushure mekunge kambani yafunga kuita yakazara chirongwa chekudzivirirwa kwezvinhu zvako zvese zvehungwaru, kubva kunyoresa kutengeserana kune zvigadzirwa zvega. Kune izvi, yakave nerubatsiro rwekunze rwehunyanzvi mune yepamhepo trademark dziviriro, MarkMonitor.
Chirongwa ichi chakatangwa kuti chiongorore misika yese uye mawebhusaiti ega ega ekutengesa zvigadzirwa zvemanyepo. Tsvagurudzo yakatarisanawo nemawebhusaiti anoshandisa zita reBelstaff muzita ravo rezita, pamwe nemawebhusaiti akajairika aisanganisira zvigadzirwa zvekunyepedzera zveBelstaff.
Mumashoko a Elena Mauri, mukuru wedhipatimendi rezvemitemo reBelstaff:
Wese munhu kuBelstaff anofara nezvakabuda mutongo uyu. Kune mamwe akakosha emhando dzemhando yepamusoro dzakakwanisa kutora mukana weiyo US anti-manyepo mitemo, zvisinei, isu tinotenda kuti nyaya yedu yakaisa bhawa yakatonyanya kukwirira nekuda kwenhamba isina kumboitika yemapeji ewebhu akavharwa kamwechete kamwe. . Maitiro ese epamutemo akatora isingasviki mwedzi mina uye hapana imwe yepamakumi maviri emawebhusaiti akataurwa mune iyi kesi ichiri kushanda nanhasi. Isu zvirokwazvo hatizononoka kutevera iyi nzira yepamutemo zvakare mune ramangwana kana zvichidikanwa, uye isu ticharamba tichitora zero zero yekushivirira kune chero maitiro asiri pamutemo. Munyika yanhasi yakanyanya kuwanda yedhijitari, iri kuwedzera huwandu hwemberi-hwekufunga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zviri kuwedzera mupiro wavo online.
Kutengeswa kwepamhepo kwemafashoni emhando yepamusoro kucharamba kuchikura
Zvinoenderana nezvakafungidzirwa nekambani yekuongorora McKinsey, Zvinotaridza kuti kukura kuri kuita kwekutenga zvigadzirwa zvepamhepo pamhepo zvichaenderera, zvichifungidzira kuti kusvika 2025, e-commerce kutengesa kuchamiririra 18% yezvose zvekutengesa kwepasirese pasirese.
Gavin haig, CEO weBelstaff, akataura nezve izvi:
KuBelstaff, e-commerce yanga iri injini yakakosha pakukura kwechiratidzo chedu. Nekudaro, isu tanga tichizivawo kuti padhuze nezvakanaka zvekupinda mumusika wekutengesa wepamhepo, tinogona kutambura nemhedzisiro yakaipa yevanyepedzeri. Kubva pakutanga, takasarudza kudzivirira vatengi vedu kuti vasawe nyajambwa wevanyepedzeri, tichaita zvese zvatinogona kuchengetedza vatengi vedu vakavimbika uye nemhando yedu, yakavakwa nekungwarira kukuru uye nesimba mukati memakore ese.
Zviuru zveCommerce zvakatengesa zvekunyepedzera zvakabviswa
Zvizhinji zve zvigadzirwa zvekunyepedzera anga ari mabhachi nehembe dzekunze, kunyanya emanyepo emakopi eBelstaff anotengesa zvakanyanya bhachi reganda. Iyo makopi ekunyepera iwo aive magadzirirwo kubva kumwaka wapfuura anga asisiri mukugadzirwa kuBelstaff.
MakiMonitor tekinoroji yehunyanzvi inokwanisa kuongorora yakazara network yemapeji ewebhu, kusanganisira zvese zvakarongedzwa uye zvisina-indexed mhedzisiro, pamwe nekuongorora maitiro ekutanga senge webhu dhizaini dhizaini uye maitiro ekubhadhara. Mitsva yekutsvaga yeBelstaff yakafumura zviuru zvitatu zvekunyepedzera kutengesa mapeji ewebhu, uye tekinoroji yakaratidzawo kuti anopfuura mazana masere emapeji ewebhu aya aifambiswa nemunhu ari kuChina.
Jerome sicard, MarkMonitor Regional Director weSouthern Europe, akati:
Iyi sarudzo inotumira yambiro yakajeka kune vanyengeri vepamhepo uye inosimbisa kukosha kuri kuwedzera kwekuchengetedza online brand. Iyi haisi kesi yekutanga yerudzi rwayo, zvisinei mutongo wedare wakaunzwa naBelstaff hauna kujairika nekuda kwenhamba zhinji yemapeji ewebhu akaonekwa uye akaendeswa kumutengi kuti atongwe. Nekuda kwekuita kwekuita kwechikwata chezvemutemo cheBelstaff, kambani yemutemo yeUS DWT, uye kushandiswa kwetekinoroji yazvino mukudzivirira chiratidzo chepamhepo, Belstaff inogona kuenderera nekuvimbika uye nekuchengetedzeka ichipa vatengi vayo zvinhu zvavo zvoumbozha kuburikidza nechipo chepamhepo.
Kubva pakaburitswa mutongo uyu muna Chikumi, chirongwa cheBelstaff chekuchengetedza mhando chakaramba chakasimba uye kambani hairegere kutora danho rakafanana mune ramangwana kurwisa vamwe vangangoita manyepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Zviito zvemutemo neBelstaff zvinokwanisa kuvhara mazana ezvitoro zvepamhepo zvezvinhu zvekunyepedzera